Vaovao - Aquaculture - mitondra fahafahana lehibe ny fitomboan'ny fangatahana
Aquaculture - Ny fitomboan'ny fangatahana dia mitondra fahafahana lehibe
Nivelatra sy nivoatra haingana ny indostrian'ny fambolena. Amin'izao fotoana izao, ny fiompiana trondro dia mahatratra 50 isan-jaton'ny trondro laniana maneran-tany. Heverina fa hitombo hatrany ny fiankinan-doha amin’ny fiompiana trondro, izay im-betsaka ny tahan’ny fitomboan’ny famokarana hena hafa. Ity fiankinan-doha amin'ny fiompiana trondro ity dia manome fahafahana lehibe, fa mampitombo ny risika ho an'ny mpamokatra.
Satria mihamafy ny fanerena hampitombo ny vokatra, mitombo ny ahiahy momba ny fiantraikan'ny rafitra fiompiana akoho misokatra amin'ny tontolo iainana sy ny karazam-biby noho ny aretina sy ny fitomboan'ny fako. Mandritra izany fotoana izany, ny trondro sy ny akorandriaka natsangana tamin'ny rafitra misokatra dia mora voan'ny aretina misy ao amin'ny toeram-ponenana voajanahary, ary tsy maintsy miantehitra amin'ny renirano na ranomasimbe mba hitondra ny fako sy hitazonana ny fepetra mety. Sarotra amin'ny rafitra misokatra ny fampiharana ireo fepetra biosecurité mahomby ilaina amin'ny fiarovana ireo karazana teratany sy fiarovana tontolo iainana tsy misy aretina ho an'ny voly salama. Ireo anton-javatra ireo dia nampitombo ny fitakiana rafitra mifototra amin'ny tany izay manasaraka ny trondro fiompiana sy ny akorandriaka amin'ireo mpifanolobodirindrina aminy.
Ny rafitra mihidy, rafitra mifototra amin'ny tanky toy ny Re-circulating Aquaculture Systems (RAS) na rafitra mikoriana, dia manome fisarahana amin'ireo karazana teratany ary mamela ny fitomboan'ny famokarana any amin'ny toeram-pambolena. Ireo rafitra voarakitra ireo dia ahafahana mamorona fepetra tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny voly, manatsara ny vokatra sy ny kalitao. Ny RAS aza dia mampiasa rano kely kokoa.
Fomba azo antoka, maharitra, mahomby amin'ny fanaraha-maso tanteraka - notsorina.